William – AsiaApps
January 10, 2019 WilliamApp NewsNo Comment on Messenger ရဲ့ဒီဇိုင်းကာလာအသစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြရဲ့လား?
Facebook ဟာ ၂၀၁၈ အစောပိုင်းလောက်ကတည်းကကြေညာခဲ့တဲ့ Messenger update အသစ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ server-side ကနေ region အားလုံးကို update ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ server-side…
December 27, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ ဆီစတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Android Pie update
Google ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Operating System ဖြစ်တဲ့ Android Pie ဟာတော့ Samsung ရဲ့ flagship device Galaxy S9 နဲ့ S9+ ဆီကို beta program…
ကိုယ်ပိုင် Browser အသစ်တစ်ခုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi
December 26, 2018 WilliamReviewsNo Comment on ကိုယ်ပိုင် Browser အသစ်တစ်ခုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi
တရုတ်ကြီး Xiaomi ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကပဲ Mint Browser အမည်ရှိတဲ့ lightweight browser တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Lightweight browser ဖြစ်တဲ့အတွက် App storage ကတခြားပုံမှန် Browser တွေလောက်နေရာမယူသလို ပိုပြီးတော့လည်းမြန်ဆန်နေမှာပါ။ ဖုန်းဆိုဒ်က 10MB…
OnePlus 6T ကြော်ငြာရဲ့ လွဲမှားမှုကို user တွေရိပ်မိပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေ
December 24, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on OnePlus 6T ကြော်ငြာရဲ့ လွဲမှားမှုကို user တွေရိပ်မိပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေ
OnePlus ဟာပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလအကုန်နားလောက်မှာ သူ့ရဲ့ OnePlus 6T အတွက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကြော်ငြာဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုကို user တွေရိပ်မိသွားတာကြောင့် ဝေဖန်မှုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှားကိုမပြောခင် ပထမဉီးဆုံး OnePlus 6T ကြော်ငြာဗီဒီယိုကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကြော်ငြာမှာဆိုရင် အိပ်ယာနောက်ကျတဲ့အခန်း၊ ညရှု့ခင်းကို…
Autoplay option ကိုအသုံးပြုသူတွေပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ YouTube!
December 21, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Autoplay option ကိုအသုံးပြုသူတွေပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ YouTube!
YouTube app ကနေကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါ နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအလိုအလျှောက်ဖွင့်ပေးမယ့် Autoplay option ကိုတော်တော်များများအသုံးပြုကြမှာပါ။ Autoplay option ဟာ YouTube server ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အရင်ဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အလိုအလျှောက်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ User ကြိုက်/ မကြိုက်…
iOS မှာထက်စာရင် Android ဘက်မှာ ကြည့်ရှု့တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ Pornhub!
December 19, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on iOS မှာထက်စာရင် Android ဘက်မှာ ကြည့်ရှု့တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ Pornhub!
Pornhub ဆိုတဲ့ Website ကိုတော့ တကူးတကမရှင်းပြတော့ပါဘူးနော်။ ?? ချိဖတို့အလည်သွားနေကျ ?) ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pornhub ကဖော်ပြတဲ့ စစ်တမ်းအရ ၂၀၁၈ တစ်နှစ်တာအတွင်း သူ့ဆီလာတဲ့ ကြည့်ရှု့သူ ရာခိုင်နှုန်းဟာ iOS ထက်စာရင် Android…
လာမယ့်၂၀၁၉ မေလမကုန်ခင်မှာ ပထမဉီးဆုံး 5G စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ OnePlus
December 13, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on လာမယ့်၂၀၁၉ မေလမကုန်ခင်မှာ ပထမဉီးဆုံး 5G စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ OnePlus
Samsung, Huawei အစရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ OnePlus ဟာအရမ်းကြီးလှတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် သူလည်းနောက်ဆုံး Network ကွန်ရက် နည်းပညာကိုလိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ နည်းပညာကွန်ရက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 5G Network ကိုအမှီလိုက်ဖို့ 5G Network နဲ့…